Report: Defamation? International standards and Myanmar’s legal framework — အသရေဖျက်ခြင်းဆိုတာ ဘာလဲ: နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဥပဒေမူဘောင် – Free Expression Myanmar
May 03, 2019 by Coordinator	in Publications ထုတ်ဝေစာများ
Download the full report Defamation? International standards and Myanmar's legal framework »
Defamation is not…
International standards on defamation
Defamation law in Myanmar
Conformity to basic international standards
Myanmar’s defamation laws in practice
အသရေဖျက်ခြင်းဆိုတာ ဘာလဲ : နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဥပဒေမူဘောင် »
မြန်မာနိုင်ငံသည် ဒီမိုကရေစီကို စတင်ပြောင်းလဲသည့် ပထမဆုံးသော နိုင်ငံမဟုတ်ပေ။ အခြားသောနိုင်ငံများစွာပြောင်းလဲပြီးသည့်နောက်သို့ လိုက်ပါခြင်းဖြစ်ပြီး၊ အသရေဖျက်ခြင်းဥပဒေများကို ပြောင်းလဲခြင်းက ဒီမိုကရေစီ၏ အရေးအပါဆုံးသော ပထမခြေလှမ်းအဖြစ် ပြောင်းလဲပြီး သည့် နိုင်ငံအများစုတွင် တွေ့ရှိနိုင်သည်။ အပြောင်းအလဲမရှိဘဲနှင့် ဒီမို ကရေစီမှီတည်နေရသည့် အများပြည်သူ့ဆွေးနွေးငြင်းခုန်မှုကို ပွင့်လင်း လွတ်လပ်စွာ မပြုလုပ်နိုင်ပေ။
ဒီမိုကရေစီသို့ပြောင်းလဲနေသည့်နိုင်ငံများသည် ရည်မှန်းချက်ထားရှိရန် ပန်းတိုင်တစ်ခုလိုအပ်ပြီး၊ ယင်းမှာ နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများပင် ဖြစ်သည်။ အသရေဖျက်မှုဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများမှာ လွတ်လပ်စွာရေးသား ထုတ်ဖော် ပြောဆိုခွင့်နှင့် ဂုဏ်သိက္ခာ အခွင့်အရေးအကြား ချိန်ညှိ ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ယင်းချိန်ညှိဆောင်ရွက်ချက်များကို နိုင်ငံ တကာအဖွဲ့အစည်းများစွာတွင် အသေးစိတ်စူးစမ်း လေ့လာခဲ့ပြီးဖြစ်သ လို၊ နိုင်ငံတကာတရားရုံးများတွင် နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက အထူး ကြပ်မတ် စမ်းသပ်အသုံးချခဲ့ပြီးလည်း ဖြစ်သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် အ သရေဖျက်မှုဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများသည် အများပါဝင် စည်း နှောင်မှုရှိပြီး ဖြစ်လေသည်။
ယခုအစီရင်ခံစာမှာ အသရေဖျက်ခြင်းဆိုင်ရာ အခိုင်မာဆုံးသော နိုင်ငံ တကာစံနှုန်းများကို တစ်ခုချင်းစီဖော်ပြထားပြီး ဖြစ်သည်။ ကံမကောင်း စွာပင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဥပဒေမူဘောင်နှင့် ဥပဒေအသုံးပြုမှုများတွင် နိုင်ငံ တကာစံနှုန်းများ လစ်ဟာနေပါသည်။ ယုတ်စွအဆုံး တက်သစ်စဒီမိုက ရေစီအတွက် အခြေခံအကျ ဆုံးဖြစ်သော စံနှုန်းများကိုပင်လျှင် မြန်မာ နိုင်ငံဥပဒေနှင့် တရားရုံးများက ထောက်ခံပံ့ပိုးထားခြင်းမရှိပါ။
သို့သော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံသည် ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းစ နိုင်ငံ ဖြစ်သည်နှင့်အညီ နောင်လာမည့်နှစ်များစွာအတွက် အစိုးရမှ အစီအ စဉ်များချမှတ်အကောင်ထည်ဖော်ရန် အင်မတန်ကောင်းမွန်သော အ ခွင့်အရေးလည်းရှိလေသည်။
မြန်မာနိုင်ငံရှိ အသရေဖျက်မှု ဥပဒေ
မြန်မာနိုင်ငံအသရေဖျက်မှုဆိုင်ရာဥပဒေများ - Myanmar’s defamation laws:
မြန်မာနိုင်ငံဥပဒေများနှင့်နိုင်ငံတကာအခြေခံစံနှုန်းများကိုနှိုင်းယှဉ်လေ့လာခြင်း - Myanmar laws compared to international standards:
Tagged with: 66(d) ၆၆(ဃ), Anticorruption Law, Defamation အသရေဖျက်မှု, Electronic Transactions Law, Law Protecting the Privacy and Security of Citizens, News Media Law, Penal code ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မ, Telecommunications Law ဆက်သွယ်ရေးပုဒ်မ